Enọre-n-dụmgbe-na-weg ike imepe CMS maụbụnrụnyenzukọgịma jikwaandịụrụ网站na ikpo okwu。 Ka e are yana-achọrọgịma gharaịnwetaakaụntụchịkwagị-kedu ihe ga ga-eme?
数据源-MySQL n’ihu-phpMyAdmin-nke ga-enyeregịaka ijikwaakaụntụonyeọrụsaịtịgị网站naịmeihe ozugbo na chekwa数据。 Ngwáọrụahụjikọtaraya na nnukwu ogwe njikwa ngalaba（cPanel，Plesk，VistaPanel，wdg）na，mgbeọna-anọghị，en ike itinye ya na savagị网站nandịnrụnyanak nakanabaị （Softaculous） Agaghịatụlentinyeakwụkwọntuziaka maka obere ntuziaka a.
1.1 Ụzọdịaṅaaka Nduzi a Ga-ewe?
1.2 Ihe NlereanyaNgwaọrụna Nduzi A
3 phpMyAdmin njikwa njikwa maka XMB论坛
4 额外的SQL Usoro：MepụtaAkaụntụOnyeỌrụ
phpmyadmin bu ihentanetị，nke mepere emepe nke PHP maka njikwa nchekwa data MySQL.
Tobias Ratschiller，yymepụtaraya，phpMyAdmin na phpMyAdmin na 1998 MySQL-Webadmin，manatọfuruọrahahụna 2000 n’ihi naọnweghịoge ijilekọtaya。 Mmemme，2001年，今天，phpmyAdmin。 masterganiihu ya n’etitindị网站管理员bụn’ihi njiri mara webusaiti，ma dwakwa mfe iji nweta ngwaahụ网站na ngalaba njikwa ngalaba（cPanel，Plesk，VistaPanel）.
Ụzọdịaṅaaka Nduzi a Ga-ewe?
ike i My Adminọọbat bat data phpMyAdmin：
Ntuziaka a ga-egosigịotu esi ejiọbụlan’imeụzọabụọahụarụọrụSQL na njirimaragị.
Ihe NlereanyaNgwaọrụna Nduzi A
Nsetiti usoro CMS kacha ewu ewu nandịodeakwụkwọ，nhọrọmaka ntuziaka a dara WordPress na Nzuko XMB，agbanyeghịna enwere ike itinye usoro nkuziahụna ngwanrngsaịtọọbụladabere na wan.
Ntụziakaahụga-egosigịotuịga-esi jiriụzọabụọaedepụtaran’elu makatebụlonyeọrụnchekwa dataọbụla.
Banye naakaụntụcPanelgị（maọbụngalabanlekọtaBochumweebụbọlaọzọna ngalabagị）。 ChọọphpMyAdmin n’okpuru otu’Enweta data’wepịakara phpMyAdmin：
NchọgharịweebụphpMyAdmin ga-emeghe na windoọhụrụ。 Ozugbo ban banyere，họrnchekwa数据ịchọrọịrụọrụ网站na akuku aka ekpe。不存在，nchekwa数据为wptest_wp234。帕亚.
您是ebe nchekwa数据专家，是ga-ahụndepụtanketebụlya niilen’akụkụaka ekpe ya，是ebe isi peeji na-egosigịndepụtanke otutebụlndtuahọnzi是ọwaịrụno Iji banye nandepụtandịụrụgị，pịanatebụl’wp_users’ma leleendepụtankendịọrụ.
电子邮件，URL URL，Wedg Mepeeahịrịjikọtaranaakaụntụnjirimaragị网站naịpị“ Dezie”（由akara ngosipensụlna-esotenjikọ）iji bido imezi ozigị。我的世界–恩格斯·奥涅玛·恩科·恩耶可以加济里·德齐
Iji gbanweepaswọọdụgị，ịkwesịrịhịrọMD5网站或菜单ndọpụta。 Deepaswọọdụsiri ike（随机码生成器makansonaazụka mma）。 Ozugboịmechara，chekwaa mgbanwegị.
MD5bụ首字母缩写词maka Ozi-Digest（算法）v。5，密码32位。Ulo’user_pass’ga-agbanwepaswọọdụọhụrụgịna eriri akpa nmba MD5 32.
ụbnirụnaịchọrọiwepụakaụntụspam niile，laghachiazụnatebụl’wp_users’，họrọahịrịndịọrụweepịabọtịnụ’Hichapụ’na ala nke ibeahụ。 Hbụrụn’ịchọrọiwepụotu onyeọrụ，intad，naanịpịanjikọ“Hichapụ” n’ahịrị onyeọrụ（lee ihe onyonyo ebe a n’aka nri）.
phpMyAdmin在数据库中保留数据，并在SQL中运行SQL。 Mgbe imepere nchekwa数据-phpMyAdmin，ga-ahusoro nketaabụna isi peeji-Chọgharịa，Structure，SQL，Chọọ，Tinye，Mbubata，Mbubata，Nrụọrụ：pịataabke SQL iji nweta shei deeb na-agbankwupụtagị。 Rịbaaka na nseta ihuenyo 4 na ntuziaka a makaọnọdụtabahụ.
玛拉：网站名称为“ youraccountname”，名称为pụtaraaha njirimara mba nnabatagị。 Nke abụụdịnjirimara nchekwa datakachasịna gburugburu Bochumòkè，也就是na-ekenye nchekwa dataọbụlana onyeọrụya。 N.ihi ya a mata（“ _”）n’etitigịBochum aha njirimaraakaụntụna aha nchekwa datagị。将数据添加到nke najirimara nchekwa数据中。 Mgbakọnke ga ga-ejibụnke egosiri nanrụnyephpMyAdmingị.
1. Gbanwee okwuntughe onyeọrụ（MD5）：
wp_users SET SET user_pass = MD5（’testuserpasswhere’）WHERE`ID` = 2;
wp_users编辑Mmelite’youraccountname_databasename’wp_users’wp_users’n’ime nchekwa data’youraccountname_databasename’.
SET`user_pass` = MD5（’testuserpasshere’）na-edobe uru nke njirimara’user_pass’na MD5哈希字符串nke’testuserpasswhere’.
Ebe’ID’= 2; na-agwagịna NJ ojii onyeịna-etinye mgbanwe maka yabụ＃2。哦，你在新泽西州吗？ nikere ikeịbụNJọrụọbụla.
2. Dezie ozi njirimara：
UPDATE`youraccountname_databasename`.`wp_users` SET`user_login` =’aha njirimara ohuru’，’user_nicename` =’aha njirimara ohuru’，’user_email` ='[Email na-echebe]’EGO’ID` = 1;
Banyere片段mbụ，UPDATElinena-akọwapụtaokpokoro a ga-agbanwe，na ebe nchekwa datadị.
SETfunction a na-arụna 3 d icheiche：ọna-edobe’user_login’na’user_nicename’na uruọhụrụ’aha njirimaraọhụrụ’，yana’user_email’na'[Email na-echebe]’。请在“用户名”中输入“ user_nicename”，然后在“ user_nicename”中输入以下名称：nkembụbụaha njirimara ejiri abanye，nkeikpeazụbụaha ga-egosi na ibeweebụgị。在…上：’greatboy84’bụaha nbanye，’Frank Span’bụahaegosipụtarana ibe.
WHERE’ID` = 1; agwagịna ID onyeọrụịgbanyerebụnọmba＃1.
在用户ID = 2的情况下，在用户名数据库中显示您的帐户名称。
Ebe’ID’= 2 na-egosi Njirimara onyeọrụịna-ehichapụbụ＃2.
phpMyAdmin njikwa njikwa maka XMB论坛
Nbanyegịna Ngalaba阿卡拉面板na-emeghe phpMyAdmin。 Họrọnchekwa datagịmachọọmakatebụl’xmb_members‘：o o nwere ihe otu ndi otu gi di.
PDa’Dezie’naahịrịjikọtaranaakaụntụọrụgịma dezie ozi njirimaragị（lee fotodịn’okpuru）。见bọtịnụ’Gaa’iji chekwaa mgbanwegị.
Ihena-esonụ2 koodu片段na-egosigịotu esi dezie ma b bhichapụotu XMBọrụakaụntụ网站na MySQL.
更新`youraccountname_xmbdatabase`.`xmb_members` SET` aha njirimara` =’bigsmurf85’，`paswọọdụ`= MD5（’xmbuser178pass’），’email` ='[电子邮件na-echebe]’，`saịtị`=’http：/ /domain.com’，`ọnọdụ`=’US’WHERE`uid` = 139;
WordPress d’nịelu，koodu SQL a na-eme ka ozi onyeọrụnweta ugbu a naụkpụrụọhụrụakọwapụtara.
Hichapụsi’youraccountname_xmbdatabase..xmb_members` UID = 178
数据NJ maọbụkarịa（’uid’ebe a）na cheekwa data’xmb_members’。 NkeabụọakọwapụtaranọmbaNJ onyeọrụ，178南京.
1996年，Usoro MD5发行人，MD5哈希，Hans DobbertincharapụtaramkparịtaụkanaọrụMD5散列，näekerịtaakụkọbanyerendịzọtụtụafọ。 Mgbeanyịkwuru’ịkparịtaụka’anyịna-ezubeọnọdụnkeụdịodide diche iche（yabụokwuntughe）不可以。 Akwukwo a zuru oke ma enweghi ike kpuchie ya na otu paragraf na ntuziakadịnkenke，Manaatụlaegwu-MD5 ka nwere ikeịchekwagịn’ọtụtụisiọwụwadịkaesinọwaaya naakwụkwọ.
Agbanyeghị，usoro chekga-eme mgbeịgbanwecharapaswọọdụgịna phpMyAdmin（iji MD5 izo ya ezo）bịgbanweyaọzọnaprofaịlụnjirimara WordPressgị。 N’ezie，WordPress ga-ezochipaswọọdụgị网站na ijiọbaakwụkwọakpọrọphpass，nkena-agụnyenchebe ma ya mereọbọghịngọngọ算法ngwa ngwa.
Zybụonyeumengwụapụtaghịnanhọrọna-ezighi ezi。 Karịamgbeọbụla，usoroaghụghọanyịzụpụtaraiji chekwaa ogetọghataranaarụmọrụweebụsaịtịna okporoụzọdịelu，yabụkaanyịghara ileghara paragraf a.
Usoroahụdịmfe-ihe niileịga-emebụimeghendepụtandịụrụgịn’ime nchekwa datagị（ịnwere ike ijiụzọnyochaa makaụdịọrụadịmfe），pịabọtịnụ "德齐" maka eriri onyeọrọahọrọma dezie mpagharandịa（hapụIDdịkaọbụ）：
Na mgbakwunye，SQL专家，maka nhazi ederede onyeọrụm gosirigịnambụna ndu a.
Oh，kaanyịdepụtaat ole na oledịmkpa：ịịọịọụụboro boro boroụi i亦称iji nwee ha iji。 Ọzọkwa是ike iji’forum bot’na-ebipụtaiwubọọdụ，iwu ngalaba yana ihendịọzọ。 N’ezie，echichegịbụnjedebe。
Koodu onodu aputa ga emeputa onye oru ohuru ma gha enye ihe ngbama（ihe omuma ya）na njiri mara’user_login’，’user_pass’，’user_nicename’，’user_email’，’user_regised’和’user_status’.
插入banye’youraccountname_databasename`.`xmb_members`（’aha njirimara’，’paswọọdụ`，’email`，’ọnọdụ’，’ọnọdụ`）值（’fairyland’，MD5（’fairypass123’），'[E-mail na-echebe ]’，’会员’，’美国’）